Dhaartu maxay tahay. WQ: Omer Suleiman AliHiiraan | Hiiraan Net | Wararka somalia | Somali news | Warar, Quraan iyo Tafsiir.Hiiraan | Hiiraan Net |
Dhaartu maxay tahay. WQ: Omer Suleiman Ali
Ugu horrayn waxaa iga su’aal ah ma jiraa cid weli is weydiisay waxa ay dhaartu tahay?
Marka uu qof wax baranayo wuxuu ka cilmi qaataa ruuxa wax baraya hase yeeshee rasuulka scw waxaa macallin wax bara u ahaa Alle. Weli ma hayo meel ay culumadii hore iyo kuwa dambe midna ku macneeyey dhaartu waxa ay tahay ciddii haysana waxaan ka codsan lahaa in ay ii soo sheegaan meesha looga hadlay iyo cidda kia hadashay. Wixii aan anigu hadda halkan idiinku sheegaana waa fikir aan is tusay ka dib markii aan arkay Alle oo ku dhaaranaya abuurkiisa iyo laftiisaba. Markaas ayaan is weydiiyey Alle isaga oo aan dhaaran ayaa la ogol yahay lana og yahay in uusan run mooyee been sheegin ee muxuu u dhaaranayaa? Halkaas ayaan waxaa ka helay in ay dhaartu macne kan aan u haysto ahayn ay lee dahay. Dadkuna Alle oo keliya ayuu ku dhaartaa markaas ayaa laga rumaystaa marka dhaartu maxay tahay?
Markii aan arkay in dadku markii ay wax isku qabtaan marag goob joog ahna la waayo ayay dhaari ku waajibaysaa, marka dhaartu waxay buuxinaysaa meeshii maragga. Ka dib markii aan dhan kasta ka eegay kuna sameeyey baaritaan waxaa ii soo baxday in ay dhaartu tahay marag u qabsasho, cidda laga dhaaranayo loo qabsnaayo.
Markii marag goob joog ah ama xog ogaal ah la waayo cidda keliya ee aan laga xog ogaalsanayni waa Alle, sidaas ayaa dadku ugu dhaartaan ama marag ugu qabsadaan Alle oo keliya. Ruuxii Alle u qabsada marag been ah macnaheedu waa ugu dhaarta been wuxuu ka dembi weyn yahay ruuxa beenta ku dhaartay, waayo waa been ku abuurasho Alle lagu sameeyey.
Dadku wuu dhaartaa wuxuuna ku dhaartaa Alle oo keliya, haddii uu wax kale ku dhaarto waxay la mid noqonaysaa in wax aan xog ogaal ahayn sida Alle oo kale oo ka dhigo Alle oo kale. Dadka la garay in ay Alle u marag qabsadaan markii aanay haysan marag kale, laakiin Alle muxuu ugu dhaaranayaa waxyaabaha ka midka ah abuurkiisa? Maxay xog ogaal u yihiin oo ay marag uga yihiin Alle? Marka waxaa lagama maarmaan ah in aynu soo qaadanno aayadaha uu Alle ku dhaaranayo qaarkood.
Suuradaha Quraanka ee ka bilawdo wawga (و) dhammaantood waa dhaar uu Alle ku dhaaranayo. Matal suuradda Al-Casar وَالْعَصْرِ waa dhaar uu Alle ku dhaaranayo waqtiga, As-Shamsina wuxuu Alle ku dhaaranayaa qorraxda, Al-Laylna wuxuu Alle ku dhaaranayaa habeenka, Al-Fajarna wuxuu Alle ku dhaaranayaa oogga waaberi iyo suurado fara badan oo kale.
Haddii aan soo qaato suuradda (وَالْعَصْرِ) wuxuu macnaheedu noqonayaa, in dadka inta xaqa rumaysay kuna dhaqanta wanaagana samaysa mooyee inta kale ay ku sugan yihiin tacab qasaare waxaa iiga marag ah waqtiga.
Marka waqtigu ma og yahay arrinkan uu Alle maragga uga dhigtay? Waa la hubaa marba haddiiba uu Alle marag ka dhigtay in uu waqtigu marag ka yahay in uu inta islaamka ah mooyee dadka intiisa kale ay ku sugan yihiim tacab qasaare. Sida uu waqtigu maragga uga noqday oo ku ogaaday Alle nooma sheegin, hase yeeshee qiyaas macquul ah waa la samayn karaa.
Marka waxaa la soo maray waqti uu qiyaame iyo xisaab dhacay ama wax waliba waqti ayay lee yihiin oo dhaceen. Waxaan uga jeedaa wuxuu waqtigu marag ka yahay in waqti isaga ka mid ah uu xisaab dhici doono horyana u soo dhacay dadka intooda gaalada ahaydna cadaab galeen intii Islaamka ahaydna janno.
Suuradaha dhaartu ku jirto waxaa ka mid ah
Haddii aan soo qaato (وَالْعَادِيَاتِ) Al-Caaditaat- wuxuu Alle marag u qabsanayaa fardaha, macnaheeduna wuxuu noqonayaa: waxay farduhu marag iiga yihiin in waxa ay guux bixinayaan, waxa ay dab shidanayaan, waxay ay cadaw subixii ku waaberiisanayaan, waxa ay bus iyo habaas kicinayaan iyo waxa ay cadawga awooddiisa dhex ka jebinayaan waa dadka oo Eebahood ku dhega adag oo diidmo badan awgeed.
Waxa maragga ahi waa ruuxda faraska oo ah ma dhimato aan dhimanayn. Marka ay malaa’igtu Alle ku lee yihiin ma waxaad dhulka ku beeraysaa mid dhibaato aan jirin bada oo dhiig xaaraan ah ku daadiya waayo malaa’igtu weligeed wey jirtay wayn jiri doontaa, sideenna oo kale ayayna ummado qiyaamahoodii kacay ula soo shaqeeyeen.
Sidoo kale suuradda Assaafaat وَالصَّافَّاتِ wuxuu Alle malaa’igta ama dadka mu’miniinta ah ee mar kasta salaadda iyo jahaadka Alle dartiisa ah u safan marag ugu qabsanayaa in uu Ilaah yahay mid keliya oo wax la mid ahi jirin.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ(الأعراف 172).
Haddii aan macnaha si kooban idiinku sheego waa sidatan.
Wuxuu Alle isu wada keenay wixii Aadam ka farcami lahaa oo dhan nafahoodii markaas ayuu ku dhahay Eebihiin ma ahay, markaas ayay ku dheheen haa, markaas ayuu ku dhahay waxaan maragga idiin geliyey in aydaan maalinka qiyaame u dhihin nalooma sheegin.
Sidaas ayay nafaha dadka iyo malaa’igtuba uga yihiin marag in Alle keli yahay wax la mid ahina jirin.
Dhammaan suuradaha uu Alle ku dhaaranayo ama maragga ku qabsnaayo waa wada run biyo kama dhibcaan ah oo marag ka wada ah waxa uu Alle maragga uga dhigayo.
Dhaartu waa marag u qabsasho waxa lagu dhaaranayo loogu marag qabsnayo. Wixii Alle uu marag u qabsado ama uu ku dhaartaana marag ayay si xaq ah uga yihiin arrinka uu Alle uga dhigtay maragga.
Qofkii markii uu dhaaranayo dhaha waa taan aabahay waayaa, laguma sheegi karo dhaar ee wuxuu habaaray aabihiis oo uu dhahay aabahay ha dhinto.
OMER SULEIMAN ALI 26/03/13